Odisha Tours Odisha | | Hlola i-Flora ne-Fauna - 993.702.7574
Uhambo olusendle lwe-Wildlife Odisha ngeSandpebbles - Okuhlangenwe nakho okubukeka ngemvelo, i-Flaura ne-fauna ka-Odisha.
Ukufuna ukuhamba kwezilwane zasendle ezingokoqobo? Odisha Tours Odisha yindawo yakho yokugcina ukuvakashela!
Nakuba amabhishi namathempeli athatha indawo ye-baton ukuze bathandwa, i-Wildlife Tours Odisha iyamangalisa ukuzwa. Ngenqwaba yamapaki kazwelonke, izindawo zokugcina ama-tiger, nezindawo zokuhlala zasendle, izwe liye lahlalisa izinhlobo zezilwane nezilwane ezingenakuthola kwenye indawo emhlabeni. Yibani amaHlathi amaMangrove namanxweme aseBhitarkanika noma amahlathi aseCandaka, yonke i-nook ne-cranny yasempumalanga ye-Indian ihlanganisa izilwane zasendle ezicebile.
Odisha yakho ye-Wildlife Tours , uthola ithuba lokubona izilwane zizungeze endaweni yazo engazitholakalanga, zilalele imisindo yazo futhi uzizwe ukujabula kwenhliziyo yakho ngenjabulo. Lapha, ungabona amakhulu ezinhlobonhlobo zezidalwa ezihlanganisa i-tiger, indlovu, ingwenya, inyamazane, i-jackal, nezinye eziningi endaweni yazo yemvelo.
Iphakheji lethu le-Odisha le-Wildlife Tours lihambisana nezithakazelo zakho futhi linikeza ithuba lokubona okungcono kakhulu kwezilwane zasendle ukuthi uhulumeni kufanele anikele.
DAY 01: Ukufika kweBhubaneswar
Ukufika eBhubaneswar Airport / Isiteshi Sokuthutha kanye nokudlulisela ehhotela. Ngesonto ntambama baya ethempelini laseLingaraj, iKhandagiri Udayagiri Jain Caves. Kusihlwa kusihlwa e-Ekamra Haat Dinner nasebusuku busuku eBhubaneswar.
Ngemuva kokudla kwasekuseni bavakashela uSatkosia nge-Angul. Thatha isikebhe sokuhamba ngesikebhe eSatkosia Gorge lapho ungathola khona u-Mugger noGharial ohlangothini lwezintaba. Ntambama ukuhamba ngokuhamba endleleni. Dinner nobusuku ebusuku eSatkosia.
ULANGA 03: Satkosia - Bhitarkanika
Ngemuva kokudla kwasekuseni uvakashele Bhitarkanika. Ngena ku-Resort yethu .Ngemva kwesidlo sasekhaya sasekhaya saseKalibhanja Diha esikebheni esasemaphandleni esivunyelwe uMnyango we-Wildlife, ukujabulela umbono we-Ramsar. Kusihlwa kusivakashele ithempeli laseJagannath ukuze lihlanganyele ku-Live Aalati Darshan. Kusihlwa ujabulele umlilo womlilo nge-Snacks kanye neDinner. Ngobusuku ku-Sand Pebbles Jungle Resorts.
Ngemva kwesidlo sasekuseni sasekhaya sasekhaya, vakashela e-Bird sanctuary, behamba ukuya embhoshongweni wokuzingela weNkosi yase-Ancient, ukuhamba ngezinyawo ezihlukahlukene emkhunjini ongasemaphandleni ovunyelwe uMnyango we-Wildlife, ukubona izinkukhu. Ngemuva kokudla kwasemini kumamyuziyamu nasendaweni yephrojekthi. Ngobusuku ujabulele umlilo wekamu nge-Snacks kanye neDinner. Ukuhlwa ebusuku Izinhlanzi zesihlabathi ze-Jungle Resorts.
Ngemuva kwesidlo sasekuseni sasekhaya sasekhaya saseSimilipal Tiger Reserve. Ngena ngemvume ehhotela. Ngemuva kokuhamba kwansuku zonke ukuhamba kwemvelo kanye nemvelo ekutadisheni emasimini e-herbal, vakashela epulazini elizalisayo. Dinner kanye nobusuku eSimilipal.
Ngemuva kokudla kwasekuseni bavakashele eBarehipani naseJoranda Waterfalls naseJungle Safari. Bese uvakashela e-Chahala Zone. Dinner kanye nobusuku eSimilipal.
DAY 07: Similipal - Ukuhamba
Ngemuva kokuhamba kwasekuseni ekuhambeni okuqhubekayo